Radio laascanood | Archive | waraysiyada
Dalagyo beereed oo markii u horeysey degaanada lagu guulaystey inay ka baxaan degaanka Ceegaag.(SAWIRO)
Magaaladda Ceegaag oo ah goob biyo ka dheer ah isla markaana ay ku adag tahay in qof ugu badheedho inuu beer ka yagleelo ayaa hada maraysa ...
More waraysiyada News
Madaxwaynaha maamulka Khatumo State Of Soomaaliya Mudane Cali Khaliif Galayd waraysi uu siiyay Universal TV uuna kaga hadlay arimo badan oo ku aadan siyaasada Khatumo.
Madaxawaynaha Maamulka Khaatumo oo waraysi dhincayo badan taabanya ka bixiyay arimo ay ka mid yihiin wasiirada uu soo magacaabayo,Soomaliland,Puntland iyo dhinacyo badan(qaybtii 2aad)
waraysiga qaybtiisii labaad halkan ka daawo
Madaxawaynaha Maamulka Khaatumo oo waraysi dhincayo badan taabanya ka bixiyay arimo ay ka mid yihiin wasiirada uu soo magacaabayo,Soomaliland,Puntland iyo dhinacyo badan (qaybtii 1aad)
waraysigii qaybtiisii koobaad halkan ka daawo.
Guuldaradii Xalay Soo Gaartay Real Madrid oo dhawr arimood lagu sababeeyaya.
Kooxda Atletico Madrid ayaa 1-0 ku qaarijisay Real Madrid kulankii lugta labaad ee Super Cup-ka Spain waxayna ka qaadeen koobka kadib ...
Wenger Oo Doonaya Inuu Iska Iibiyo Lukas Podolski.
Tababaraha kooxda Arsenal ayaa doonaya inuu iska iibiyo 29 jirka weerar ka uga ciyaara kooxdiisa ee Lukas Podolski.
Wariyaha shabakada Goal ee ...
FIFA oo diiday racfaankii ay qaadatay kooxda Barcelona.
Barcelona ayaan awoodi doonin inay ciyaaryahano lasoo saxiixato ilaa bisha January 2016ka marka uu xirmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee haatan, ...
Arsenal Oo Ku Dhaw Inay Soo Gabagabayso Saxiixa Adrien Rabiot.
Kooxda Arsenal ee dalka ingiriiska ayaa ku dhaw inay soo gabagabayso saxiixa da,yarka qadka dhexe uga ciyaara PSG ee Adrien Rabiot.
Chelsea Oo Guul Raaxoleh Ku Bilaabatay Horyaalka Ingiriiska
Jose Mourinho iyo kooxdiisa Chelsea ayaa horyaalka ingiriiska ku bilabatay guul ay u qalantay kadib ciyaar ay iskaga horyimaadeen kooxda heerka ...
Falanqaynta Kulanka Isreeb Reebka Champions League Ee Besiktas v Arsenal.
Kooxda Besiktas oo dhawaantaan lawareegtay laacibiin uu ka mid yahay weerar yahankii Chelsea iyo Newcastle Demba Ba ayaa marti qaadi doonta ...
wararkii hore	Xukuumadda oo Shaacisay in ay Shidaal ku soo Saarayso Lix Sano Gudahood	October 23, 2014 Xukuumadda Somalia ayaa qorsheynaysa inay shidaalka Soomaaliya kusoo saarto muddo lix sano gudahood ah, sida uu sheegay wasiirka ...	Dowladda oo sheegtay inaan dalka la keeni karin Ciidan ka socda Sierra Leone	October 23, 2014 Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah qoraal ugu dirtay dowladda Sierra Leone iyo ururka Midowga Afrika, kaas ...	Yoweri Museveni oo sheegay Al Shabaab in aysan ka baqayn	October 22, 2014 Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo wareysi siinayay wakaalada Reuters ayaa waxaa uu ka hadlayay arimo ay kamiyd ...	Kenya”Waxaan Soomaliya ku wareejinay Rag Burcad-Badeed”	October 22, 2014 Wasiirka Arimaha Dibada Wadanka Kenya Amina Mohamed ayaa sheegtay in Macquul ay tahay in Dowlada Kenya ay kuwareejiso ...	Gargaar loo waday Baraawe oo dhax loo galay	October 22, 2014 Wararka ka imaanaya Deegaanka Shalaanbood ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in Gaadiid Gargaar u wada Degmada ...	Baarlamaanka Soomaliya oo Cod uqaadaya Sharciga Kaluumeysiga	October 22, 2014 Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in maanta ay Cod u qaadaan Xeerka Kaluumeeysiga Dalka oo horey Baarlamaanka ...	ciyaaraha	Macalinka Roma Oo U Digay Man City: Cadaadiska Idinka Ayuu Idiin Saaran Yahay.	September 28, 2014 Tababaraha kooxda Roma Rudi Garcia ayaa sheegay in Manchester City uu saaran yahay cadaadis badan islamarkaana ay qasab ...	Maxaa Ka Qaldanaa Goal Line Technology Kulankii Arsenal v Tottenham Ee Xalay.	September 28, 2014 Sida lala wada socdo Technology-yada cusub ee isha gor gorka ayaa xalay lagu arkay qalad wayn kadib markii ...	Laurent Blanc Oo Shaqadiisa PSG Ay Halis Ku Jirto, Yaase U Sharaxan Badalkiisa Hadii Lacayriyo?.	September 28, 2014 Shaqada tababaraha kooxda PSG Laurent Blanc ayaa u muuqata mid halis ku jirta kadib markii uu hos u dhac ...	Line Up-ka Rasmiga Ah Ee Merseyside Derby: Liverpool v Everton.	September 27, 2014 Waxaa la soo saaray Shaxda rasmiga ah ee kulanka Derby Merseyside ee dhex mari dona goor dhaw kooxaha ...	Loic Remy: Arsenal Marnaba Ma Aysan Doonayn Inay Ila Wareegaan”.	September 27, 2014 Weeraryahanka cusub ee kooxda Chelsea Loic Remy ayaa ka warbixiyay qaabkii uu ugu biiray kooxdiisa cusub iyo sababtii uu ...	Carragher: Liverpool Aad Ayeey U Liidataa Suarez La,aantiis”.	September 27, 2014 Halyeeygii hore ee kooxda Liverpool Jamie Carragher ayaa ka warbixiyay xaalada liidata ee ay ku jirto Liverpool bilowga xiliciyaareed ...	Rodgers: Waa Lama Huraan Inaan Guul Ka Gaarno Everton”.	September 27, 2014 Tababaraha kooxda Liverpool Brendan Rodgers ayaa ka hadlay kulanka adag ee ay marti qaadi doonaan daqiiqado yar kadib ...	Liiska Kala Sareynta Gooldhalinta Horyaalka Premier League.	September 22, 2014 Iyadoo shan kulan kaliya la ciyaaray horyaalka Premier League hadana ciyaartoy badan ayaa durbaba magacooda sii gelinaya liiska ...	Barcelona Oo Dhaawac Ku Wayn Doonta Neymar Iyo Rakatic.	September 22, 2014 Kooxda Barcelona oo xalay guul raaxo leh ka gaartay kooxda Levante ayaa wayn doonta laba ka mid ah ...	Daniele De Rossi Oo Dhaawac Ku Seegi Doona Kulamada Man City Iyo Juventus.	September 22, 2014 Laacibka qadka dhexe ee kooxda Roma ayaa ku dhaawacmay kulankii ay kooxdiisu 2-0 ku garaacday kooxda Cagliari.